Nidaamka iskuullada ee dalka Iswiidhen oo farta lagu godey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nidaamka iskuullada ee dalka Iswiidhen oo farta lagu godey
La cusbooneeyay onsdag 20 mars 2013 kl 10.37
La daabacay onsdag 20 mars 2013 kl 09.12
Nidaamka iskuulladu wuxuu horseedi karaa faqooqnaan
Sawirle: Tor Johnsson / Scanpix
Culimo caalami ah ayaa ka digtey halista ay leedahay in faraha laga qaado oo laga dhigo howlo mulki loo leeyahay nidaamka tacliinta ee dalka Iswiidhen.
Wixii ka dambeeyey sannadihii sagaashameeyadii oo wax laga badaley xeerkii hagayey iskuulaadka iyadoona la ogolaadey in nidaamka tacliinta la geliyo suuqa tartanka ayaa sannadba sannadka ka dambeeya waxaa sii kordhayey iskuullada loo leeyahey mulkida gaarka ah. Middaasi ayaa dalka Iswiidhen ka dhigtay waddammada safka hore kaga jira nidaamka iskuullada ee madaxa bannaan.
Dalka Iswiidhen ayuu nidaamka iskuullada ee ka jiraa uu yahay mid aan caalamka lagu arag, iyadoona lagu miisaaniyad geliyo dhammaan habka tacliinta maalka umadda, isla-markaana loo suurtageliyey sidii looga macaashii lahaa.
Henry Levin, oo ah caalin ka howl-gala jaamicadda Columbia ee dalka Mareeykanka wuxuu ka digay kala faqooqnaanta ka dhalan karta habka iskuullaadka ee dalkan ka jira mustaqbalka.
- Waxaa soo muuqatay dhibaatada la xiriirta kala faqooqnaanta ee bulshada dhexdeeda, waana mid caqabad badan keeni doonta mustaqbalka. Waa caqabad aan mar un dhicin, hase yeeshee u dhacda si tartiib tartiib ah ee bulshada kala burburineysa, sida uu sheegay Henry Levin
Henry Levin ayaa muddo baaritaan ku hayaay wixii ka dambeeyey nidaamka maal-gelinta ee ardeyga iyo sannadihii sagaashameeyad oo la ogolaadey in iskuullada gaar loo yeelan karo, wuxuuna ula jeedaa in dalka Iswiidhen uu ugu horeeyo dhammaan caalamka iyo waddammada qarbigaba u furfuridda iskuullada ee suuqa furan.
- Nidaamka dalkan ayaa ah midka ugu xag-jir-san.
Midda kale ee lala fajaco ayaa ah in aannu jirin nidaam guud ee xadideya iskuullada ey degmooyinku maamulaan iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida matalan dalka Holan oo ey in muddo ahba ka jireen iskuullo madax-bannaan iyo dalka Mareeykankaba, sida uu qabo Henry Levin.
Cilmi-baaris wada-shaqeeyn oo lala sameeyey jaamicadaha Istockholm iyo Uppsala , dhowaantanna lagu soo daabici doono war-geeyska muddoolaha ah Geography, waxaa su'aallo lagu weeydiiyey 5 000 oo reer iyo sababaha ey ku doorteen noocyada kala duwan ee iskuullada dhallaankoodu dhigtaan. Waxaana halkaa uga muuqatey cilmi-baareyaasha in qooysaska dhaqaalahoodu sarreeyo ey ka warwareegtaan iskuullada ey ajaaniib dhigtaan ama isku dhafka ah, waana mid hor-seedaysa kala faqooqnaan.
Sida uu qabo Patrik Scheinin, ahna caalin ka howl-gala jaamicadda Helsingfors, in tacliinta heerka sarreeya ee dalka Finland ugu wacan tahay tacliinta isku dhiganta ee iskuullada, waana mid aan ka jirin dalkan Iswiidhen:
- Waxyaalaha aan ka welwel-sanaan lahaa ayaa ah in ey iskuulladiinna ka jiraan kala duwanaan tacliineed oo aad u sarreeysa, waalidiintu iney ka welwelaan iney dhallaankooda geeysaan iskuul wanaagsan. Markaa waxaa sahlanaanaysa in iskuullada la kala qiimeeyo oo goobo badan laga yimaado, middaasina dhibaateeynayso iskuulladii ku yiiley xaafadahaa, sida uu sheegay Patrik Shienin.
Sideed u aragtaa nidaamka iskuullada ee gaarka loo leeyahey?
Mid aan wanaagsanayn